Ugqugquzele ukudluliswa kwabafeyilayo | IOL Isolezwe
Ugqugquzele ukudluliswa kwabafeyilayo
Isolezwe / 20 February 2013, 10:54am / MHLENGI SHANGASE
UNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga noMengameli weNatu uMnuz Siphosethu Ngcobo , bebhunga ngokuthile kwingqungquthela yeNatu
Izihambeli zomhlangano we NATU e Coastlands.ISITHOMBE PATRICK MTOLO
UNGQONGQOSHE weMfundo eyisiSekelo usephumele obala wathi akumele umfundi afeyiliswe kabili kodwa kumele uma kwenzeka kube kanye bese edluliswa ngoba ugcina eshiye phakathi engasaqedanga ukufunda uma elokhu ephindaphinda ibanga.
UNkk Angie Motshekga uthe akusizi ngalutho ukufeyiliswa kwabafundi ngoba kudingeka kube nezindlela zokusiza labo bafundi abathatha kancane ngoba basuke baziwa.
“Akukwazi ukuthi kungalokhu kufeyiliswa abafundi ngoba bagcina ngokushiya phakathi bangaqhubeki. Kumele kube nezindlela zokusiza labo abasuke bengenzi kahle ngoba basuke baziwa ezikoleni,” kusho uNkk Motshekga.
Ukusho lokhu izolo ngesikhathi ekhuluma engqungqutheleni yezinsuku ezimbili zothishanhloko namaphini abo benyunyana iNatu eThekwini.
Ukusho lokhu nje i-Afriforum ikhala ngokuthi abafundi bazodluliswa bengazi lutho okuzoba nomthelela emiphumeleni ka-matric.
Ngokwesi-phakamiso soMnyango esizobekwa ezithebeni zomphakathi ukuze uphawule ngazo, abafundi kumele bafeyile kanye.
Isiphakamiso sifaka abafundi abenza i-FET Phase, esuka kwaGrade 10 kuya kwaGrade 12, ukuthi nabo kumele bafeyile kanye kusuka kwaGrade 10 kuze kuye kwaGrade 12.
Lokhu kusho ukuthi uma umfundi efeyile uGrade 10, akumele aphinde afeyiliswe uGrade 11 kodwa kumele adluliswe.
Kwamanye amabanga lokhu kuvele kuyenzeka, kwi-FET phase lokhu bekungenzeki.
Abanye othishanhloko bebebamba abafundi kwaGrade 11 bangabadlulisi ngoba befuna ukuba nemiphumela emihle kwa-matric.
UNkk Motshekga uthe lokhu ngeke kube nomthelela emiphumeleni ka-matric, okunalokho kuzokwenza ukuthi abafundi baqhubeke bangashiyi phakathi.
Ukhale nangokuthi akumele othisha belokhu bekhunjuzwa ukuthi kumele bahlezi besemakilasini, befundisa, amahora abekiwe nsuku zonke.
Uthe uma kuwukuthi bayakwenza lokhu ngeke sibe khona nesidingo sokuthi kubuyiswe abahloli bakudala ababelusa othisha.
“Akukuhle ukuthi njalo kuhlale kukhunjuzwa othisha ukuthi bahlale befundisa ngoba yinto engabe ikubona nje njengabantu abafundile. Ngeke sibe khona nesidingo sokuthi kubuyiswe abahloli,” kusho uNkk Motshekga.
Ekhuluma ohlelweni i- CNBC Africa, ngoMsombuluko uMengameli Jacob Zuma , uthe uma othisha bengafundisi baqhubeke nokulova uzophoqeleka ukuthi alande abahloli abazobalusa.
UNkk Motshekga ukhalile ngokulova kothisha wathi kuvulwa izikole bavakashele esinye sezifunda kuleli angasidalulanga wafica othisha ababalelwa ku-1 000 belovile.
Uthe: “Abangu-580 kubo kwakungothishanhloko okwathiwa bahambise izingane zabo ezikoleni. Kusho ukuthi kothisha abangu-500 000 esibaqashile abangu-50 000 bayalova nsuku zonke.”
UMengameli weNatu, uMnuz Siphosethu Ngcobo, ukhale kakhulu ngalaba bahloli uZuma asabisa ngabo ukuthi akumele baphazamise othishanhloko futhi akumele babathathe noma yikanjani.